Vaz 21083 - ekilasini encane uquqaba
Vaz 21083 - phambili drive emithathu umnyango hatchback, ekilasini compact ne transverse injini layout.
Ikhishwa ngaleso iVolga Automobile Plant kusuka 1984 kuya ku-2003, inguqulo restyled ikhishwe namuhla - Vaz 2113. Eyokuqala bavela izimoto elihambayo okubangelwa yokwanda omkhulu semizwelo. Noma kunjalo, ngemva konke lokhu kulo lonke Autoclassic Soviet kwaba ngendlela eyodwa, okusho ukuthi isenzakalo esingavamile iphutha. Ngo imodeli emakethe yasekhaya yabizwa ngokuthi "Samara", okuyinto ngokuhamba kwesikhathi washintshelwa ku ukuthekelisa "Sputnik". Vaz 21083 wabeka isisekelo ukwenziwa phambili isondo "Lada" izimoto, okuyinto ukukhiqiza kube yilolu suku. Ngaphezu phambi-wheel drive imoto Sasihlukile kuzo zonke ukusebenza ashukumisayo efanayo Classic ezinhle, ukuphepha kanye nokusebenza kahle ngcono.
Ngezinye Vaz 21083 entsha lapha bonke babengaphansi phambi-wheel drive, ukuma komzimba, injini, phambi ukumiswa, le yokuxhumana ukuthungela uhlelo, yokubeka kanye pinion ayo, amabhampa plastic, njll ... Ngokwemvelo, imodeli wokuqala behlupheka ngokuvamile "izifo ebuntwaneni" ngesimo squeaks phambi iphaneli sivala eliphansi nokunye., Yikuphi kuyaqedwa ngomqondo phambili ngesikhathi senqubo yokukhiqiza. Ezinye zazo wakwazi ukubaleka, kodwa abanye namanje ubuthi izimpilo abanikazi lokhu hatchback.
Vaz 21083 ngenxa ngendlu ezintathu kwaba ifakwe iminyango ebanzi, kodwa naphezu kwalokhu, emnyango futhi phuma ukuze esihlalweni ezingemuva nzima. Lo mqondo ngokuvamile esichazwa njengesono esiphambene imoto nentsha ezemidlalo, futhi ine kokubili ngebuhle nebubi. Ngaphakathi, Upholstery kuhle eliphezulu, izihlalo ukhululekile, ne ezintathu izinhlobo ukulungiswa. Of bokwenza bungabonakala yokuntuleka ezingemuva ikhanda Imingcele, indawo esingesihle sekhiba ukuphepha onqenqemeni okusezingeni eliphezulu isiqu. Kungenzeka Songa backrest zokuhamba imithwalo jikelele siqala phansi flat, njengoba kunjalo ezimotweni zanamuhla, asikwazi eligoqiwe. Omunye ethile ye hatchback (ngendlu ezinhlanu version kanye) akuyona okungcono umsindo ukwahlukanisa, okuyinto kubonakala imigwaqo engalingani noma emgwaqeni omkhulu ngenkathi ushayela ngesivinini ngenhla 100 km / h.
Nakani Vaz injini 21083. Ekuqaleni, njengoba amandla iyunithi efakwe injini imoto (1.3 amalitha, 65 amalitha. Nge.) Kufundza ngababili nge-gearbox ezine-speed. Ngokunakekela efanele, ngesikhathi esifanele uwoyela isihlungi esikhundleni futhi ngokucophelela handling isisetshenziswa injini enjalo aba yizinkulungwane 150 amakhilomitha. Ngo-1987, ukuze esikhundleni akusebenzi umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli motor weza Vaz 21083 ivolumu 1.5 l, futhi ngokushesha ukufakwa iyunithi efana ivolumu efanayo. NgangikuMoya umkhuba Autovase futhi ukuthekelisa 1.1-litre okufushane motor (53 l. C.), Yikuphi akazange ihluke tyagovity, ngenxa okuyilokho, eqinisweni, akazange engraft. Ngesikhathi, kwanqunywa ukuba niqhubeke ezinhlanu-step Mechanics, esetshenziselwa kuze kube yilolu suku.
Kwakukhona yabadobi, noma imodeli ngisho ngazinye "eziyisishiyagalombili". Ngokwesibonelo, ungase ukuhlangabezana hatchback nge isondo ngakwesokudla (inguqulo ukuthekelisa), izimoto kanye wonke-wheel drive oyisibonelo phezulu ukusonga. Ngokuvamile Bethuka bonke ongakhetha okukhethekile ezenziwe oda.
Izinsimbi zokuzivikela zokuhlobisa Ukushisa kurediyetha
Uyini fuel futha edluliselwe Vaz-2110. Indlela yokusebenzisa ngayo i-alamu
Silungisa ingaphakathi ngezandla zabo
Inhlanzi Pollock. Ungadliwa kuwo
Indlela ukuhlanza Suede amabhuzu.
What do ubukhulu kwesibeletho
Tank "Into 430": Uhlolojikelele kanye nezici
Yini indwangu emangalisayo Poplin?
Indlela ukuhlobisa ikhekhe, izindlela ezilula
Ifilosofi yemvelo Yenguquko njenge- nqubekela ngamasiko asendulo
Valgus Plus: Izibuyekezo yangempela. Umqondisi ngoba Valgus Plus umunwe: intengo, izithombe
Amashubhu ngoba izinduku ukudoba kanye ukuphotha izintonga edayisa izinto
"Lilac Bush" (Kuprin), isifinyezo - Indaba Uthando